ငလျင်အတွက် ကြိုတင် ပြင်ဆင်ဖို့နဲ့ ငလျင်လှုပ်ရင် ခိုအောင်းဖို့ | အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
ငလျင်အတွက် ကြိုတင် ပြင်ဆင်ဖို့နဲ့ ငလျင်လှုပ်ရင် ခိုအောင်းဖို့
Posted on 25 March 2011 by lettwebaw
ငလျင်များသည် ရုတ်ချည်း ပြင်းထန်စွာ ဆိုင်းမဆင့်ဗုံမပါ ဖြစ်ပွားတတ်စမြဲဖြစ်သည်။ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော အန္တရာယ်များကို စောစောစီးစီး ရှာဖွေဖော်ထုတ်ကာ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းဖြင့် ငလျင်ဒဏ်ကြောင့် အပြင်းအထန်ဒဏ်ရာရခြင်းနှင့် အသက်ဆုံးရှုံးခြင်း အန္တရာယ်များကို လျော့ပါးစေနိုင်ပါသည်။
ငလျင်မလှုပ်မီ အိမ်မှ အန္တရာယ်များကို စစ်ဆေးပါ။
စင်များကို နံရံတွင် ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲ တွဲနေပါစေ။
ပျက်စီးနေသော ဓာတ်မီးကြိုးများ၊ ဓာတ်ငွေ့ပိုက်ဆက်များကို ပြုပြင်ပါ။ ယင်းတို့သည် မီးဘေးအန္တရာယ်ကို ဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါသည်။
ရေအပူပေးစက်ကို နံရံတွင် ခိုင်မြဲစွာ တပ်ဆင်ပြီး ကြမ်းပေါ်တွင်လည်း မြဲမြံအောင် ဝက်အူစုပ်ထားပါ။
မျက်နှာကြက်နှင့် အဆောက် အအုံအောက်ခြေများ နက်နဲစွာ အက်ကွဲနေလျှင် ပြုပင်ပါ။ ယင်းသို့အက်ကွဲနေခြင်းသည် အဆောက်အအုံ၏ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကို ထိခိုက်စေမည့် ပုံပေါ်နေလျှင် နားလည်တတ်ကျွမ်းကျင်သူများနှင့်ဆွေးနွေးပါ။
အခန်းတစ်ခုစီအတွင်းတွင် ဘေးကင်းသော နေရာများကို ကြည့်ထားပါ။
• လက်နှိပ်ဓာတ်မီးနှင့် ဓာတ်ခဲအပိုများ။
• ဓာတ်ခဲသုံး ရေဒီယိုအငယ်နှင့် ဓာတ်ခဲအပိုများ။ (သတင်းပလင်းအတွက်)
• ရှေးဦးသူနာပြုပစ္စည်းထုတ်/သေတ္တာ၊ ရှေးဦးသူနာပြု လက်စွဲစာအုပ်။ (ရှိလျှင် ကောင်းသည်။ မရှိလျှင် ဆောင်ပါတော့။)
• အရေးပေါ် အစားအစာနှင့် သောက်ရေ။
• မရှိမဖြစ် လိုအပ်သော ဆေးဝါးများ။
• ခိုင်ခန့်သော ဘိနပ်များ။
ခိုင်မာလေးလံသော အိမ်ထောင်ပရိဘောဂအောက်တွင်ဖြစ်စေ၊ အတွင်းဘက်နံရံ အနားတွင်ဖြစ်စေ ကပ်နေပြီး တစ်ခုခုကို ဆွဲကိုင်ကာ မိမိကိုယ်ကို မြဲနေအောင် ဆောင်ရွက်ပါ။
(နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုက သူတို့ဝန်ထမ်းများအတွက် အရေးပေါ်အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကို ကြိုတင် ပြင်ဆင်ရန် လက်စွဲစာအုပ် ထုတ်ဝေရာမှာ အဲဒီ့စာအုပ်ကို ကျွန်တော်က မြန်မာဘာသာကို ပြန်ဆိုပေးခဲ့ရဖူးပါတယ်။ အဲဒီ့ ပြန်ဆိုချက်ထဲက ငလျင်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းကို ကောက်နုတ်တင်ဆက်လိုက်တာပါပဲ။)
4 thoughts on “ငလျင်အတွက် ကြိုတင် ပြင်ဆင်ဖို့နဲ့ ငလျင်လှုပ်ရင် ခိုအောင်းဖို့”
Nd S on 25 March 2011 at 8:33 pm said:
hninn naing on 25 March 2011 at 11:24 pm said:
tai on 26 March 2011 at 10:23 pm said:
How do you know earth quake is coming? I understand that there is no signal about earth quake.
lettwebaw on 26 March 2011 at 10:41 pm said:
Very fresh idea that needs to be gilded with gold. 😀 It’s universally known that no one can predict or forecast earthquakes. (“Earthquake” isaone word vocab, not two words, if you don’t mind.) However people are prone toastate of panic and ready to run around “during” the time of earthquakes. The information given is simply to have them some idea of what to do when one occurs. (And again, if you don’t mind, “about” is not the correct preposition to be followed after “signal.” The correct usage is “signal + for + Noun” or “signal + to + infinitive verb.”) Thanks anyway for your “invaluable” contribution.
I’m sure you missed the first sentence, Mr. Tai. I wrote, “ငလျင်များသည် ရုတ်ချည်း ပြင်းထန်စွာ ဆိုင်းမဆင့်ဗုံမပါ ဖြစ်ပွားတတ်စမြဲဖြစ်သည်။” 🙂